Fikarohana momba ny firaisana Ny fampodiana indray miaraka amin'ny fanovana ara-pinoana: Teraka indray ny kristiana noho ny tantaram-piainan'ny Bodista taloha lasa izay momba an'i Palitha Senewiratne | Gamini Jayasena - Fikarohana Reincarnation
Notadiavin'ny: Ian Stevenson, MD ary Francis Story
From: Fototry ny karazana Reincarnation, Boky II: Santatra folo any Sri Lanka, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Fiainana fohy an'ny zazalahy Kristiana tany Sri Lanka
Palitha Senewiratne dia teraka tao 1952 ary nipetraka tao Nittambuwa, tanàna iray 22 kilaometatra na 35 kilometatra avaratra atsinanan'i Colombo. Colombo dia renivohitr'i Sri Lanka izay misy mponina manodidina ny 650,000. Sri Lanka dia firenena nosy amin'ny morontsiraka andrefan'i India. (1)
Ny rain'i Palitha dia nomena anarana hoe Lionel sy ny reniny Vinnis. Tena akaiky ny reniny i Palitha, izay nahafinaritra tokoa ny nanjaitra. Nifandray kokoa tamin-drainy izy. Ny hetsika iray izay nankafizin'i Palitha sy ny rainy tamin'ny fiarahany miasa dia ny fambolena ao amin'ny saha. I Palitha dia nanana rahalahy iray antsoina hoe Nimal, izay 4 mbola tanora noho Palitha. Niady matetika izy mirahalahy ary i Nimal na i Palitha aza. Na eo aza ny mahatsiravina, raha ny alika kely Nimal, Palitha dia tezitra be tamin'ilay canine ka te hamono azy izy. Nanana rahalahy iray antsoina hoe Ranjith koa i Palitha. (2)
Manana herinaratra sy fiara i dadatoa Charlie; Elefanta kilalao an'i Palitha
Charles Senewiratne dia dadatoan'ny dadatoan'i Lionel Senewirante, rain'i Palitha, izay nipetraka teo akaikin'ny fianakavian'i Palitha. I Charles dia nahomby ara-bola ary nankafy ny haingo maro nandritra ny fotoana, anisan'izany ny herinaratra tao an-tranony sy ny fananany fiara. Ny zanak’i Charles dia nanana môtô. (3)
Talanjona tamin'ny elefanta i Palitha, izay hita any Sri Lanka. Ian Stevenson dia nanondro fa ny elefanta dia tsy maintsy miaina amoron'ny ony na renirano, satria mila mandro izy ireo. Nanana elephant kilalao i Palitha, izay handro amin'ny lavadrano iray amin'ny fananan'ny fianakaviana. (4)
Manatrika sekoly kristiana i Palitha ary manana ny Famonoana ho faty
Ny fianakavian'i Senewiratne dia kristiana ary i Palitha dia niditra tao amin'ny sekoly fanabeazana fototra Kristiana, izay tafiditra ao amin'ny St. Mary's College. Na dia ny Buddhism aza no fivavahana nalaza indrindra tany Sri Lanka nandritra ny 2000 efa-taona mahery, ny Portogey, ny Holandey ary ny anglisy dia nanjanaka ny firenena nosy ary tamin'ny fanjakany dia nitondra ny Kristianisma tany Sri Lanka izy ireo. Amin'izao fotoana izao, eo amin'ny 7 isan-jaton'ny isan-jaton'ny firenena dia Kristiana, ny 70 isan-jato dia Bodista, ny 13 isan-jato dia Hindu ary 10 isan-jaton'ny Silamo.
Ao amin'ny tanànan'ny St. Mary's College dia hita ao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Veyangoda, izay misy 4.3 kilaometatra na 7 kilometatra miala an'i Nittambuwe. Nandritra ny taom-pianarana, Palitha dia nijanona tao amin'ny biraom-by iray akaikin'ny sekoly. Tamin'ny volana Jolay 1960, i Palitha dia nody avy tany am-pianarana tamin'ny fialan-tsasatra. Na dia tsy nahalala olana ara-pitsaboana aza izy, dia toa mora tohina sy tsy matotra. Na dia ny fanaony matetika dia ny fametrahana ny kitapony, izay misy boky sy elefanta kilalao ao anaty kaopy, na kabinetra, tamin'ity indray mitoraka ity dia navelany teo ambonin'ny seza ny kitapo ary nilaza hoe: "Tsy handeha an-tsekoly intsony aho." (5)
I Ian Stevenson dia nanamarika fa miaraka amin'io fanambarana io dia toa tsy nisy fironana i Palitha fa ho faty tsy ho ela izy io. Ity toe-javatra ity koa dia voamarika tao amin'ny Trangam-panjakan'olo-tokana ao Hanan Monsour Suzanne Ghanem. (6)
Rehefa niverina nianatra izy, tsy ela dia nahatakatra aretina mafy i Palitha rehefa nandoa. Nentina teny amin'ny hopitaly izy ary maty rehefa afaka andro vitsy monja niandohan'ny aretina. Nodimandry tamin'ny volana Jolay 28, 1960 i Palitha, tamin'izy valo taona. (7)
I Palitha dia nohavaozina ho fianakaviana fianakavian'ny Bodista amin'ny maha-Gamini Jayasena azy
Roa taona mahery taorian'ny nahafatesan'i Pakutha dia teraka tao amin'ny fizarana Colombo antsoina hoe Nugegoda tamin'ny Novambra 13, 1962 i Gamini Jayasena. Ny rainy dia G. Jayasena ary ny anaran-dreniny dia PK Nadawathie. Zanaky ny fianakaviana voalohany izy ary nantsoina hoe "zazakely." Nikatso io anaram-bosotra io ary nanohy nampiasa “baby” ny fianakaviana hilazana an'i Gamini. (8)
Rehefa efa 18 volana eo ho eo izy dia nanomboka niresaka fiainana teo aloha. Nilaza i Gamini fa manana reny hafa izay noheveriny ho "tena reniny." Nilaza i Gamini fa ny reniny taloha dia lehibe lavitra noho ny reniny ankehitriny. Marina izany satria vehivavy kely i PK Nadawathie, mifanohitra amin'ny renin'i Palitha. (9)
Rehefa nahita ny reniny nampiasa milina fanjairana izy dia hoy i Gamini hoe: "Misy milina toy izany any an-tranonay." Araka ny voalaza dia, nanana milina fanjaitra i Vinnis, renin'i Palitha. (10)
Nilaza i Gamini fa nisy olona iray antsoina hoe Nimal, izay nilaza i Gamini fa nandrikitra azy. Nilaza koa i Gamini fa nofidinin'ny alika i Nimal, izay marina. I Ian Stevenson dia nilaza fa i Nimal mihitsy no nanamafy ity tranga ity taminy ary nampiseho an'i Stevenson ilay kapoka avy amin'ny kaikitry ny alika aza. Nilaza ihany koa i Gamini fa nofonosin'omby i Nimal, izay nohamafisina taty aoriana rehefa nihaona tamin'i Vinnis, renin'i Palitha sy Nimal ny fianakaviana. (11)
Nilaza i Gamini fa tamin'ny androm-piainany, izy dia nanana kitapo izay mbola teo amin'ny seza teo amin'ny fonenany taloha. Ao anatin'ity kitapo ity, hoy izy, dia nitazona boky sy elefanta kilalao izy, izay handro amin'ny lavaka fantsakana. Ian Stevenson dia nanamarika fa i Gamini dia nanao fanambarana toy ny mbola niaina ny fiainan'i Palitha. (12)
Fahatsiarovana ny Fiainana taloha: Fantaro momba ny jiro herinaratra, fihodinana ary hazo oliva i Gamini, na dia tsy misy ao an-tranon'ny ray aman-dreniny aza.
Nahantra ny fianakavian'i Jayasena ary tsy nanana herinaratra ny trano manetry tena. Noho izany dia gaga ilay fianakaviana rehefa nanambara tamin'ny ray aman-dreniny i Gamini, amin'ny maha-zaza azy fa ny jiro herinaratra azo alain'ny kodiarana, toe-javatra iray izay tsy mbola fahita na nampianarina azy akory. Ankoatra ny jiro an'ny herinaratra dia nilaza i Gamini fa tsara kokoa ny akanjony amin'ny fonenany taloha. (13)
Nilaza i Gamini fa tao an-tranony talohan'ny nisy azy dia nisy “Charlie Dadatoa” izay nanana fiara ary ny fianakavian'i Charlie Uncle dia nanana moto mena, izay marina momba an'i Charles Senewiratne, dadatoan'ny dadan'i Palitha. Nilaza i Gamini fa i Charlie Uncle dia hitondra azy ho any an-tsekoly ao anaty fiara. Tadidio fa nanana herinaratra ny herin'i Charles Senewirtne. Noho izany, ny fahalalan'i Gamini momba ny jiro herinaratra sy ny jiro milina dia mampiseho ny fahatsiarovana ny fiainana taloha. (14)
Nilaza koa i Gamini fa any an-tranony, ny rainy dia hanapaka rantsankazo amin'ny hazo oliva ary hanome azy ireo sampana. Gaga ny renin'i Gamini'a raha nahare ny teny hoe "oliva" i Gamini satria ny fianakaviana tsy nampiasa an'io teny io satria tsy nisy hazo oliva manakaiky ny tranony. (15)
Araka ny filazan-drainy dia Gamini dia niresaka foana ny tranony teo anelanelan'ny 2 sy 3 taona. Nomarihiny fa rehefa tezitra i Gamini, dia te hiverina any amin'ny fonenany mialoha. Io fihetsika io, amin'ny fandrahonana hiverina any amin'ny tokantrano taloha rehefa sosotra, nojerena ihany koa Firaisana ara-piraisana ara-piraisana ara-biraon'ny Twins Burmese. (16)
Fihetsika eo amin'ny fiainana taloha: Mivavaka toy ny kristiana, mitsirika lakroa ny Gamini ary mankalaza Krismasy
Gaga ny fianakavian'i Jayasena, izay bodista, raha nahita an'i Gamini nivavaka tamin'ny fomba ofisialy kristiana iray, nandohalika niaraka tamin'ny elo. Mifanohitra tanteraka amin'ny fomba nivavahan'ny fianakaviana bodista sy ny Jayasena izany, nandohalika fa niaraka tamin'ny sorony teo amin'ny voditongony tamin'ny toerana nipetraka. (17)
Rehefa nahita hazo hazo i Gamini dia nentiny nody izy ary nangataka ny reniny nanantona azy teo amin'ny rindrina. Tsikaritr'ilay fianakaviana ihany koa fa nandà ny handeha any amin'ny tempoly bodista i Gamini ary tsy hiondrika amin'ireo moanina bodista izy, izay heverina ho fihetsika mamoafady ho an'ny zaza bodista iray. (18)
Fihetsika tsy mahazatra iray hafa ho an'ny bodista iray dia i Gamini dia tia nankalaza Krismasy. Izy dia hiresaka momba an'i Santa Claus andrasana hahazo fanomezana amin'ny ora Krismasy. (19)
Noho ireo fihetsika ireo dia niahiahy ny fianakavian'i Jayasena fa i Gamini dia efa niaina tamin'ny naha-Kristiana azy.
Fantatry i Gamini ny fiainany taloha
Tamin'ny Aprily 1965, tamin'izy roa taona sy tapany taona dia nanao fitsangatsanganana bisy ny fianakaviany ary rehefa tonga tao an-tanànan'i Nittambuwa izy dia nilaza i Gamini fa io no toerana nisy ny tranony taloha. (20)
Ny fianakaviana dia akaiky an'i Baddegama Wimalawansa, izay zanak'olo-mpirahavavy renin'i Gamini, moanina bodista ary lehiben'ny sekoly iray any Colombo. Ny fianakavian'i Jayasena dia nizara ny fanambarana nataon'i Gamini momba ny fiainana efa lasa tamin'ny Venerable (ny fomba fitenin'ny moanina bodista) Wimalawansa, izay nanapa-kevitra ny hanao fanadihadiana momba io raharaha io. (21)
Amin'ny May 2, 1965, Ven. Wimalawansa dia nitondra an'i Gamini, niaraka tamin'ny reniny, ho any Nittambuwa mba hanadihady momba izay mety ho androm-piainany izay noresahin'i Gamini. Rehefa nidina ny tanàna ny fiara dia nandeha tamin'ny lalana na lalana kely iray izy ireo. Nanondro ny sisiny i Gamini ary nijanona ny fiara. Nandeha niverina tamin'ny lalana i Gamini ary nilaza hoe: "Ity no lalana mankany an-tranoko." Avy eo izy dia nidina teny amin'ny arabe ary nanatona trano iray, izay tsy nisy olona tao amin'ny fety taloha. Ary hoy i Gamini hoe: "Tranoko ity." Hoy koa izy hoe: "Ny reniko" dia mipetraka ao. "Io tokoa no tranon'ny fianakavian'i Senewiratne sy ny toerana nipetrahan'i Palitha. (22)
Xenoglossy: Gamini dia mampiasa ny fitsipi-piainana taloha amin'ny firesahana ny ray aman-dreniny taloha
Avy eo dia niakatra teo am-bavahadin'ny trano i Gamini ary niteny hoe: "Tsy ao i Dada." Gaga ny vondrona raha nahare i Gamini nampiasa ny teny hoe "maman" sy "dadanay", satria tsy nampiasaina tao amin'ny fianakavian'izy ireo ireo teny ireo. Fa kosa izy ireo dia nampiasa ny teny Sri Lankan ho an'ny rainy, "tatha," ary "amma" ho an'ny reny.
Ireo teny hoe "daddy" sy "mummy" dia nampiasaina tany Sri Lanka nataon'ny mpitolon-karena kristiana avy any Angletera ary ny fahalalana an'i Gamini momba ireo teny ireo dia maneho ny fahatsiarovan'ny fiainana taloha tamin'ny fianatanan'i Palitha tao amin'ny St. Mary's College. Eny tokoa, ny ray aman-drenin'i Gamini dia mbola tsy naheno ny teny hoe "daddy" sy "mummy" mandra-pahatongan'ny nandefasan'i Gamini azy ireo. (23)
Fahatsiarovana lasa teo amin'ny fiainana taloha: Nahita ny toeram-pambolena nataon'i Charlie Uncle i Gamini
Gamini dia nanao fanekena faharoa raha teo amin'ny làlambe. Rehefa nidina teny amin'ny lalana mankany amin'ny tranon'ny fianakavian'i Senewiratne i Gamini dia nahita làlana kely iray hafa avy eo amin'ny làlana. Nandeha an-kavanana nijanona teo amin'io lalana kely io i Gamini ary nidina nankeny amin'ny toeram-pambolena. Avy eo izy dia niverina ary nilaza hoe: "Tsy ao i Charlie Uncle." Ny tranon'i Charles Senewiratne, ilay dadatoan'i Lionel Senewirante, rain'i Palitha, dia tena eo amin'ny faran'ny lalana kely. Ian Stevenson nanombantombana fa namboarin i Gamini fa tsy tao an-trano i Charles satria tsy napetraka teo alohan'ny trano ny fiarany. (24)
Kristianisma & Reincarnation: Ny Kristiana any Sri Lanka dia mikimpy indrindra
Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nanandrana nampahafantatra ny tenany tamin'ireo mponin-trano ireo vondrona izay nantsoin'i Gamini ho fonenany taloha. Ven. Nahatonga ny hampahafantatra ny tenany amin'ireo mponina tao an-trano i Wimalawansa satria noheverina fa kristiana taloha ny fianakavian'izy ireo, ary tsy fantatr'izy ireo ny fihetsiky ny fianakaviana kristianina iray raha nilazana izy ireo fa i Palitha izay havany maty dia efa nody indray tamin'ny maha Gamini azy. , izay fianakavian'ny bodista bodista. (25)
Ian Stevenson dia nanamarika fa ny Kristiana any Sri Lanka dia mahatohitra indrindra ny hevitra momba ny reincarnation, mifanohitra amin'ny kristiana any amin'ny firenen-kafa izay misokatra kokoa, izay nambarany tamin'ny Kristiana Sri Lankane ho vitsy an'isa ao amin'ny firenena bodista sy Hindio izay mino azy. Reincarnation. (26)
Attachments taloha: ny fianakavian'i Gamini dia nanapa-kevitra ny tsy hifandray amin'ireo mponin'ny tranon'i Gamini taloha, izay mampitomany an'i Gamini
Ankoatr'izay, nisy ny fisafotofotoana raha toa ka i Gamini ve no noresahin'izy ireo fa manana elefanta kilalao na elefanta iray marina tao amin'ny fananganana azy taloha. Satria ny trano izay nasehon'i Gamini dia ny fonenany taloha dia tsy ao anaty rano mandeha, izay ilain'ny elefanta velona, ​​Ven. Tsy nahazo antoka i Wimalawansa raha izany no toerana niainana taloha. Noho io antony sy ny olana kristiana io, Ven. Wimalawansa dia nihevitra fa tsara kokoa aloha ny mametraka fanontaniana momba ilay fianakaviana mipetraka ao an-trano izay nasehon'i Gamini fa ny fonenany taloha, fa tsy ny hidy fotsiny. Ary raha izany no niverina, dia niverina tany Colombo ny antoko. (27)
Tena sosotra i Gamini fa tsy navela hiditra amin'ny tranony taloha izy ary nitomany tsy tapaka nandritra ny 10 andro taorian'ny fitsidihana. Notohizany hatrany fa te-ho any amin'ny tranon-dreniny teo aloha izy ary mangataka hatrany ny kitapom-pianarana navelany tao an-trano. Tamin'ny fiezahana hampifaly azy dia nividy kitapo vaovao ho azy ny ray aman-drenin'i Gamini, saingy nilaza i Gamini fa izay tsy maniry ilay vaovao, fa ilay iray nananany teo aloha no tadiaviny. (28)
Fanadihadiana momba ny tranga fanodinkodinam-bola: Ny fianakavian'i Senewiratne dia mikaroka ny famerenana indray an'i Palitha
Tsy fantatr'izy ireo, niaiky ny mponin'i Nittambuwa ny moanina bodista sy ny talen-tsekoly, Ven. Wimalawansa, ary mifandraika amin'ny vazaha hafa fa io antoko manavaka io dia manao fikarohana momba ny tranga reincarnation ary nahaliana azy ireo ilay fianakaviana nipetraka tao an-trano tamin'ny faran'ny làlana nentin'i Gamini. Ireo mponina ireo dia nilaza tamin'ny mponin'ity trano ity, ny fianakavian'i Senewiratne, ny moanina bodista ary ny filohan'ny antoko tao an-tranony. (29)
Taorian'izay dia nandeha nankany Colombo i Lionel sy Vinnis Senewiratne ary niantso an'i Ven. Wimalawansa tao amin'ny sekoly izay izy no lehibe. Nanazava izy ireo fa i Palitha, zanany lahy, dia efa maty taona vitsivitsy talohan'izay. Nangataka ny hahita an'i Gamini izy ireo, saingy nolazaina fa tsy afaka nanao izany tamin'io fotoana io. Nanome sarin'i Palitha an'i Ven izy ireo. Wimalawansa, izay nampita ny sary ho an'ny fianakavian'i Jayasena. Raha nahita ny sarin'i Palitha i Gamini dia hoy izy: "Io ny zanako." Koa satria ny zaza nantsoina hoe "zaza" dia nantsoin'ilay fianakaviana, dia noheverin'izy ireo fa momba ny tenany i Gamini. (30)
Gamini dia nentina tamin'ny fiainany taloha sy ny fianakaviany ary nahafantatra ny fiainany taloha reny sy mpiray tampo aminy
Tamin'ny May 2, 1965, fony izy mbola latsaky ny 3 dia niverina niverina tany Nittambuwa avy amin'i Venise i Gamini. Wimalawansa ary nentina tany an-trano izay nolazain'i Gamini no fonenany taloha. Ny fianakavian'i Senewiratne sy ny vondron'olona marobe tonga nivory teo anoloan'ny trano. Ven. Nanoro hevitra i Wimalawansa fa i Gamini dia hanome fanomezana zava-mamy, izay nentin'ny fety, ho an'ny reniny taloha. Na dia nanamarika i Ian Stevenson fa i Gamini dia mety nahazo sombin-dàlana izay mety ho nataon'ny mpifanolo-bodirindrina, nametraka ny hatsembohana teo an-tongotr'i Vinnis Senewiratne, renin'i Palitha i Gamimi. (31)
Nangataka an'i Gamini i Vinnis hamantatra ny rahalahin'i Palitha, Nimal sy Ranjith, avy amin'ny vahoaka. Nomarihin'i Gamini izany. (32)
Fahatsiarovana ny Fiainana taloha: Ny fanamarihan'i Gamini dia nanova ny tokantranony taloha ary mahita ny kilalao elephant mandry amin'ny rano sy ny hazo Oliva izay nitaingenany
Avy eo i Gamini dia nahatsikaritra fa ny tafo ao an-tranon'i Senewiratne dia tsy "mamiratra" teo aloha. Eny tokoa, fony mbola velona i Palitha, nisy tafo nirona nanarona ny trano. Rehefa maty izy dia nametraka tafo fanitso iray, izay namirapiratra. (33)
Nahita ny lavadrano koa i Gamini izay nandroany ny elefany kilalao i Palitha. Nanao izany izy tamin'ny alàlan'ny tsilo amin'ny ahidratsy tany amin'ilay tany. Nanazava i Vinnis fa rehefa velona i Palitha, dia nisy lalana iray nitondra nankany amin'ny lavadrano, saingy taorian'ny nahafatesany dia navela tamin'ny lalana izy. Gamini dia nanondro ny tanimbary ara-bary tao an-tanàna ary nilaza hoe: "ny tanimboalintsika dia anjarantsika." Tena sain'ny fianakavian'i Senewiratne ireo tanimbary ireo. (34)
Rehefa ao an-trano Senewirtne, Ven. Wimalawansa dia naneho ny sarin'i Palitha tamin'i Gamini ary nanontany hoe: "Fantatrao ve ny fomba ity?" Namaly i Gamini hoe: "Izaho ity." (35)
Nandritra ny tao an-trano Senewiratne dia nilaza i Gamini hoe: "Nisy oliva teo aloha." Rehefa nangataka ny hanondro izany i Gamini dia nandeha teny an-tranony ary nandeha tao aorinan'ny trano, nahita ilay hazo oliva. Nilaza izy fa efa nihanika ity hazo ity. Tena nihanika io hazo oliva io i Palitha. Tadidio fa i Gamini dia efa nilaza tamin'ny ray aman-dreniny fa ny rainy taloha dia nanapaka ny sampana oliva ary nomeny azy, ary gaga ny ray aman-drenin'i Gamini fa nampiasa ny teny hoe oliva izy ireo, satria tsy mbola nampiasa ny teny hoe tsy nisy hazo oliva tao. ny faritra nonenany. (36)
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Tao amin'ny St. Mary's College, Gamini dia nahita ny Bench School Life Past, Church Pew & Boarding Home ary mamantatra ny fiainany taloha tiany.
Taorian'ny nitsidihana an'i Nittambuwa tamin'ny May 2, 1965, nentina tany amin'ny Sekolin'i St Mary i Gamimi, ary tany am-pianarana i Palitha. Vantany vao tao i Gamini dia nahita an-dakilasy izay nampianarina i Palitha ary nihazakazaka nankeo amin'ny dabilio ary nipetraka teo. Nanamafy ny mpampianatra Palitha fa io no dabilio izay nipetraka i Palitha. Tao am-piangonana tany am-pianarana dia nahafantatra ny pew izay nampiasainy tamin'ny Palitha i Gamini nandritra ny androm-piainany. (37)
Rehefa nentina teo akaikin'ny tranoben'ny trano nipetrahan'i Palitha nandritra ny taom-pianarana dia hitan'i Gamini fa tsy nihetsika ilay trano fandehanana ary rehefa hitany fa nohidiana ny varavarana teo aloha, dia nihazakazaka nankeo ivohon'ny trano izy. Tsy nahita olona izy dia nihazakazaka niverina tany amin'ny andiany ary nilaza izy hoe: "Tsy ao ny rahavavy." Ity teny ity dia mety midika fa nanantena hahita masera kristiana i Gamini. Ian Stevenson dia nampiaiky ny fahavononan'i Gamini tamim-pahasahiana hiditra tao amin'ny trano iray mbola tsy nidirany akory tamin'ny fiainany ankehitriny. Tadidio fa i Gamini dia latsaky ny 3 tamin'io fotoana io. (38)
Tao amin'ny trano fitsangatsanganana, toy ny tao amin'ny tranon'ny Senewiratne, nilaza i Gamini fa nisy hazo oliva teo amin'ilay trano. Taty aoriana dia nisy nanaporofo fa marina izany ary tapaka ny hazo oliva taorian'ny nahafatesan'i Palitha. (39)
Rehefa niverina an-tsambo avy tao amin'ny biraon'ny goavambe nankany amin'ny fiaran'ny vondrona i Gamini dia nahafantatra ny mpivarotra vatomamy iray izay novidian'i Palitha ny zava-mamy. Tao amin'ity tranombarotra ity dia nofaritan'i Gamini ny mamy tian'i Palitha, sôkôlà antsoina hoe sinibola, avy amin'ny tsipika sôkôla 5 samihafa aseho. Nanamafy i Vinnis, renin'i Palitha fa io no malalan'i Palitha ankafiziny. (40)
Reincarnation sy fitoviana amin'ny fitondran-tena eo amin'ny Palitha sy Gamini
Ian Stevenson dia nitatitra fa misy fitoviana maro eo amin'ny toetra sy ny fitondran-tena misy eo amin'i Palitha sy Gamini. I Palitha sy i Gamini dia samy gaga tamin'ny elefanta, tia mamboly ao amin'ny zaridaina, tia fofo-trondro ary tsy tia biby fiompy nefa tsy tia ary izy roa lahy dia navitribitrika. Nisy nitovitovy tamin'ny fitafiana koa. Ny ankamaroan'ireo ankizilahy ao Sri Lanka dia nanao palitao ivelan'ny pataloha azy, saingy naleon'i Palitha sy Gamini nibata ny lobaka tao anaty pataloha. I Ian Stevenson dia nanamarika fa tao amin'ny Kolejy St. Mary dia nanantena ny hanao ny fehin-dambadiny ny ankizilahy, izay angamba ilay toerana nalain'i Palitha sy Gamini io fahazarana io. (41)
Ankoatr'izay, ny fihetsik'i Gamini amin'ny fianakavian'i Senewiratne dia nifanaraka tamin'ny tsapan'i Palitha momba ireo olona ireo. Tena akaiky ny reniny, ohatra, i Palitha, fa lavitra ny rainy. Tahaka izany koa, rehefa nentina tany an-trano Senewiratne i Gamini, dia tia an'i Vinnis i Gamini ary hita fa faly be izy rehefa niaraka taminy. Ny mifanohitra amin'izany kosa dia nitomany i Gamini rehefa nanandrana naka ny tanany ny rain'i Palitha ary nanohitra ny ezaka mba ho akaiky azy. Ian Stevenson koa dia nanamarika fa i Gamini dia tsy afa-bela tamin'i Nimal. Nanazava i Gamini fa mbola diso saina izy noho i Nimal noho izy nanondro azy. (42)
Manaiky ny fanambadiana vatana vaovao ny Kristiana: ny havan'i Palitha sy ireo mpampianatra any an-tsekoly dia mino fa i Gamini no Reincarnation of Palitha
I Ian Stevenson dia nihevitra fa ity no iray amin'ireo tranga reincarnation fikarohana be indrindra indrindra, raha resaka ora ifampiresahana, amin'ny tranga rehetra nianarana azy. Notateriny ihany koa fa ny fianakavian'i Senewiratne sy Jayasena dia tsy nifankahalala aloha na mpinamana. (43)
Na dia kristiana aza izy ireo dia samy nino ny rain'i Palitha sy i Charles Senewiratne (Charlie Dadatoa) fa i Gamini no reinkarnation an'i Palitha. Hoy ny rain'i Palitha:
"Amin'ny maha-kristiana antsika dia tsy tokony hino izany zavatra tsy misy dikany izany isika, nefa izy dia nahafantatra [antsika i Gamini] rehetra ary heveriko fa tena teraka indray ny zanakay." (44)
Reincarnation ho asan'ny Devoly: Fanamby amin'ny foto-pinoana ara-pivavahana
Mpampianatra roa tao amin'ny Kolejin'i St. Mary koa no resy lahatra ny amin'ny maha-marina ny raharaha, saingy natahotra ny hilaza am-pahibemaso izy ireo noho ny tahotry ny ho voahilikilon'ny pretra iray tao St. Mary, izay nilaza, momba ity raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao ity indray, "Asan'ny ny devoly." (45)
Ian Stevenson dia nanamarika fa fanamby io tranga io satria mila porofo raha oharina amin'ny foto-pinoana. (46)
Fivavahana, Reincarnation, Kristianisma ary ny fiainana taloha Tantaran'i James Huston, Jr. | James Leininger
Tranga iray hafa izay nihaika ny finoana kristiana tamin'ny porofon'ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao koa dia i James Leininger, tovolahy iray izay nanonofy tampoka ary nahatsiaro ho mpanamory fiaramanidina mpiady tamin'ny Ady Lehibe II izay maty voatifitra ny fiaramanidina. Bruce Leininger, rain'i James, no nanadihady voalohany an'io raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao io. Rehefa nanamarina tamim-panazavana ny fahatsiarovana manokana ny fiainany taloha tamin'ny alàlan'ny fikarohana i Bruce, dia tsy maintsy nampifanarahiny ny rafitry ny finoana Kristiana evanjelika miaraka amin'ireo porofo mitombo ao amin'ny vatana vaovao indray izay namboariny. Raha te hahalala bebe kokoa dia mandehana any: James Huston, Jr. | Ny raharaha raindahiny James Leininger
Rehefa Voaroaka i Gamini dia nandrahona ny hiverina any amin'ny fonenany taloha
Ny fitsidihan'ny fianakaviana dia nitohy farafaharatsiny tamin'ny 1975, matetika nataon'i Gamini. Niseho faly izy rehefa niaraka tamin'ny fianakavian'i Senewiratne tao Nittambuwa ary tezitra rehefa nesorina. Raha resahina izy na nofaiziny ao an-trano dia nanohy nandrahona i Gamini fa hiverina any amin'ny fonenany taloha tao Nittambuwa. Araka ny efa voalaza teo aloha dia voamarina tao amin'ny Firaisana ara-piraisana ara-piraisana ara-biraon'ny Twins Burmese. (47)
Ity tranga ity dia mampiseho ireto endri-javatra manaraka ireto:
Fiovana amin'ny finoana: Palitha dia notezaina tamin'ny Kristiana ary nandeha tany amin'ny St. Mary's College, sekoly kristiana iray, fa tonga nofo indray tonga gamita ho lasa fianakaviana Buddhist.
Fahatsiarovana jeografika: Gamini dia nahafantatra ny vohitra taloha niainany, nahita ny fiainany taloha an-trano, ary koa ny tranon'i Charlie Dadatoa. Nahita ny trano fitahirizany taloha tany St. Mary's koa izy ary fivarotana vatomamy izay notsidihiny tamin'ny androny Palitha.
Xenoglossy: Nampiasa teny anglisy i Gamini mba hilazana ireo ray aman-dreniny taloha, izay tsy nampianarina azy nandritra ny androm-piainany tamim-pahamendrehana toy ny teny Sri Lankan nampiasaina tao an-tranony. Azo inoana fa i Gamini dia nahalala ny teny hoe "mummy" sy "daddy" tamin'ny fahatongavany ho nofo ho lasa Palitha, izay nanatrika sekoly ambaratonga fototra Kristiana nampianarina ny anglisy.
1. Stevenson, Ian, Cases amin'ny Type Reincarnation, Sri Lanka, Boky II, University Press of Virginia, Charlottesville, 1977, pejy 44-47
2. Ibid, pejy 66
3. Ibid, pejy 53
4. Ibid, pejy 52
5. Ibid, pejy 47
6. Ibid, pejy 48
7. Ibid, pejy 44, 48
8. Ibid, pejy 43
9. Ibid, pejy 50
10. Ibid, pejy 43
11. Ibid, pejy 43, 59
12, Ibid, pejy 43, 49
13. Ibid, pejy 43
14. Ibid, pejy 53
15. Ibid, pejy 55
16. Ibid, pejy 67
17. Ibid, pejy 43, 68
18. Ibid, pejy 43, 68
19. Ibid, pejy 72
20. Ibid, pejy 43, 44
21. Ibid, pejy 44
22. Ibid, pejy 44, 57, 66
23. Ibid, pejy 44, 57, 66
24. Ibid, pejy 57
25. Ibid, pejy 44
26. Ibid, pejy 71
27. Ibid, pejy 56
28. Ibid, pejy 66
29. Ibid, pejy 44
30. Ibid, pejy 44, 57
31. Ibid, pejy 44, 57
32. Ibid, pejy 59
33. Ibid, pejy 58
34. Ibid, pejy 59, 60
35. Ibid, pejy 61
36. Ibid, pejy 61
37. Ibid, pejy 62
38. Ibid, pejy 62
39. Ibid, pejy 62, 63
40. Ibid, pejy 64
41. Ibid, pejy 68-70
42. Ibid, pejy 66, 67
43. Ibid, pejy 47
44. Ibid, pejy 71
45. Ibid, pejy 72
46. Ibid, pejy 71
47. Ibid, pejy 76